Talafashinka Wadanka Ethopia Ayaa sheegay In Farmajo Iyo Uhuru Ay kawada hadleen Muranka Bada Kuna heshiiyeen…… – Kismaayo24 News Agency
by Mohamed Abdirashid Abaajo 7th March 2019 075
Taleefishinka qaranka dowladda Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya la go’aamiyey in lagu dhammeeyo hab diblomaasiyeed.
Ciid baddal oo ka faallooda arrimaha diblomaasiyadda ayaa BBC-da u sheegay in haddii labo dal ay is khilaafaan loo baahan yahay dhinac saddexaad oo dhexdhexaadiya, laakiin qodobkaas aan jidkii ugu wanaagsanaa loo marin.
Sidoo kale, Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar oo falanqeeya siyaasadda ayaa Danjire Ciid ku raacay fikirka la xiriira in Abiy Axmed iyo hoggaamiyeyaasha kale toona aysan awood u lahayn iney faragaliyaan arrinta badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya.
Isagoo fikirkiisa cabirayay ayuu yidhi: “Dadka Soomaaliyeed ma aqbali doonaan gorgortan dhanka xuduudda badda ah wayna ogyihiin xaqoodu meesha uu yaallo”.
Daawo: Madaxweyne Axmad Madoobe oo Kismaayo ku laabtay ayaa faah faahiyay shirkii Amniga Qaranka iyo Heshiiksii ONLF iyo Itoobiya
admin 19th February 2018 19th February 2018